I-Instagram inokulimaza impilo yengqondo yolutsha | Iindaba zeGajethi
I-Instagram ngokungathandabuzekiyo yinethiwekhi yenethiwekhi, nangona kumaxesha adlulileyo yayiyindawo apho safumana khona iifoto zazo zonke iintlobo, kodwa ubukhulu becala ubugcisa, ngoku sisiqulatho esingenasiphelo somxholo kulutsha kuzo zonke iintlobo, ukusukela kwiingozi zendlela, kude kube abachaphazelayo uzinikele ekuhlekiseni, kodwa ... Kuthekani ukuba sifumanisa ukuba i-Instagram inefuthe elibi kwimpilo yengqondo yolutsha lwethu?
Kuyabonakala ukuba izifundo zamva nje zisinika idatha ekhathazayo malunga noku, sinokuzifumana sijamelene nobhubhane wengqondo oyinyani, Kwaye abantu abancinci babonakala bengene kwimixholo yale nethiwekhi yoluntu ethatha ixesha elikhulu labo kunye nesantya sedatha yabo yeselfowuni.
Ukufikisa ngokungathandabuzekiyo lelinye lawona manqaku asemngciphekweni kuwo onke amabakala obomi bethu, kwaye nangakumbi ngoku eli xesha liyanda kunanini na ngaphambili, kwaye yile nto yayisaziwa njenge ukufikisa ixesha ngalinye libandakanya uluhlu olubanzi lobudala. Nokuba kunjalo, sisazi ukuba iinethiwekhi zentlalo zichaphazela njani indlela yethu yokucinga kubalulekile, umzekelo sisifundo esenziwe ngu IRoyal Society yoLuntu yezeMpilo, odliwano-ndlebe nabantu abangaphezu kwe-1.500 abaselula kunye nabasebenzisi be-Instagram.
Kucacile ukuba i-Instagram ibe sisixhobo sokubonisa kubo bonke abasebenzisi, inethiwekhi yentlalo ngaphandle kokunye, nangona kunjalo, kubonakala ngathi inxulumene ngokusondeleyo nokuphazamiseka kwesitayile kunye noxinzelelo, ngaphandle kokukhuthaza ukuxhatshazwa. Kuyinyani ukuba ukusetyenziswa kwayo ngokulula kunye nokungxamiseka kwehlabathi esiphila kulo kwenza ezi nethiwekhi zentlalo zibe necala elihle nelingalunganga, icala elimnyama le-Instagram yindlela echaphazela ngayo ubomi bemihla ngemihla babasebenzisi bayo abakwishumi elivisayo , kunye nefuthe elibi kwimpilo yabo yengqondo. Ngamafutshane, ukusuka I-RSPH Bafikelele kwisigqibo sokuba ukuchitha ngaphezulu kweeyure ezimbini kuncanyathiselwe iiwebhsayithi zokunxibelelana kunokuba yingozi.
Ngokuchasene ne-Instagram, elinye iqonga elinje I-YouTube ifumene ukwamkelwa ngabasebenzisi bayo ngendlela esebenza ngayo kwaye ixhomekeke kwizimo zengqondo ezilungileyo phakathi kwabathathi-nxaxheba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Instagram inokulimaza impilo yengqondo yolutsha
Babhale impilo yesinyithi kwisihloko sabo kwaye okomzuzwana ndacinga ukuba kuphela ngabo bathanda isinyithi abachaphazelekayo